Amakhamera we-Election body ukuqinisekisa ukuphepha kwabasebenzi ngabezimboni | Izixazululo ze-OMG
Amakhamera we-Eva aqinisekisa ukuphepha kwabasebenzi ngamaZimboni
Amakhamera akuyo yonke indawo. Ngamunye wethu angabamba impilo yansuku zonke ngomakhalekhukhwini. Imvamisa, abantu bavame ukuziphatha kangcono uma bazi ukuthi kubhekwe kubo. Ngisho nokusikisela kokuthi kukhona okubonayo kuvame ukuthonya abantu. Kungenzeka ukuthi, siziphatha ngendlela ehlukile kuphela uma sibona uphawu ”I-CCTV iqopha i-24 / 7“ yize ikhamera empeleni ingarekhodi. Amakhamera omzimba asetshenziswa ngentshiseko ezinhlanganweni zokuqinisa umthetho ezibhedlela nasezibhedlela. Kodwa-ke, lungasetshenziswa ekwakheni ezolimo, ezezimayini, ezokwakha nezokuhamba. Amasimu wezimayini nezolimo ahlala egcwele ubungozi angambozwa ngokusebenzisa amakhamera womzimba ngeWIFI nohlelo lokulandela i-GPS.
Ikhamera egqokiwe ye-Weldable Body Worn Camera ingagcina kalula ingxoxo phakathi komthengi nomthengisi ngesikhathi sokusebenzelana futhi kamuva kulokhu okulalelwayo nevidiyo kungenzeka kusetshenziselwe ubufakazi. Abalimi, osomabhizinisi, amabhange, izinkampani zemishwalense, izikhulu zokutakulwa eminyangweni yezomlilo futhi nohulumeni futhi angasebenzisa amakhamera omzimba ukuqapha abasebenzi babo futhi athole izexwayiso ezisongela.
Le mikhakha lapho ikhamera yomzimba ingasiza khona.
I-7. Izinsizakalo zikagesi, igesi nezokuhlanzeka
I-8. Ukuhweba okuphelele
I-9. Ukuhweba okuthengiswayo
I-10. Ezezimali, umshuwalense, nezinsizakalo zezezakhiwo
Umkhakha wezolimo uzoba obaluleke kakhulu kunanini ngaphambili emashumini ambalwa eminyaka alandelayo. Umhlaba uzodinga ukukhiqiza ukudla okuningi okungama-70% ku-2050 ukwedlula okwenze e2006 ukuze wondle inani labantu elikhulayo lomhlaba, ngokusho kwe-UN Food and Agriculture Organisation. Ukuhlangabezana nalemfuno, abalimi nezinkampani zezolimo ziphendukela kwi-Intanethi Yezinto zokuhlaziya namandla amakhulu okukhiqiza.
Wonke umlimi uzoqonda ubunzima bokugcina umhlaba wabo uphephile. Njengomnini wendawo, akujwayelekile ukuthi ube nezinkulungwane zamahektare omhlaba. Kunzima kakhulu ukuphenya nokuvikela zonke izigaba futhi kuvinjelwe abanikelayo. Kaningi kunalokho, ababambiqa abanenhloso embi. Kulula ukukhubeka ungene epulazini unganakile. Kodwa-ke, kwesinye isikhathi, amasela noma ababhikishi bazongena endaweni yakho. Nasi izeluleko ezinhle zokukusiza ukuqeda lokhu.
• Isayina indlela elula yokunciphisa ababambi, amasela kanye nababhikishi ngezibonakaliso ezizungeze indawo yakho.
• Yenza abasebenzi bakho bazi ukuthi baqinisekile ukuthi kuyingxenye yomsebenzi wabo ukubika noma yiziphi izinto ezisolisayo noma iziphambeko.
• Izithiyo ezingokomzimba Enye indlela elula yokulungisa lokhu ukusebenzisa izithiyo zomzimba. Lokhu kungaba uthango noma ucingo oluvinjelwe uma uzizwa uvimbela kakhulu.
• Ama-alamu nezinzwa ezinyakazayo Amakhamera we-CCTV namakhamera agqokwa ngomzimba anikeza ubufakazi
• Thinta izimoto zakho ngohlelo lwe-GPS olugqoke umzimba ukuthola kalula
Imishini yezolimo, izihlahla zezithelo, amapulazi obisi, namasimu makhulu futhi ayabiza, futhi imishini akuyona wonke umuntu odinga ngezikhathi ezithile ongakwazi ukuyithenga nokuyigcina. Amabhizinisi aqasha izinsiza enza kube lula ukufinyelela kulo mshini njengoba kudingeka, kepha singavikela kanjani ibhizinisi lethu nemikhiqizo?
Izinhlelo zokubhekwa kwamavidiyo zivame kakhulu futhi zithandwa kakhulu, yize kungahle kube nzima kakhulu ukuba isela lintshontshe ugandaganda kuqhathaniswa nejezi, wonke amabhizinisi okuthengisa adinga ukwazi ngomonakalo wamasela. Ikhamera yokuqapha ingaqapha amapulazi, izingadi zezithelo futhi, nezinkambu ubusuku nemini, noma ngabe uphumile ehhovisi kepha ufuna ukubheka ukuqoshwa kwamakhamera agqoke umzimba womuntu wonke amarekhodi omzuzu kanye nomsindo iCCTV engakwazi ukuwuqopha . Ngokwengeziwe, uhlelo lokuqapha lungasetshenziswa ukuqapha ukuxhumana kwamakhasimende, ukulandelela ukuphatha imali kwirejista yemali, nokuqinisekisa ukuthi bonke abasebenzi bakho namakhasimende alandela izindinganiso zokuphepha ezungeze okokusebenza.
Ukuqapha ibhizinisi lakho lezolimo kuyindlela ehlakaniphile yokunciphisa ukulahleka nokukhulisa inzuzo. Ukufaka amakhamera womzimba wokuphepha epulazini kukusiza ukuthi ubheke okwenzekayo lapho ungekho lapho.
Bonke abazali esesabeka kakhulu yikuthi ingane yabo eyeve eshumini nambili ihileleke engozini yemoto. Ngeshwa, abazali kufanelekile ukuba bakhathazeke. Imbangela ehamba phambili yokufa kwentsha ukushona kwezimoto. Ukuthi imoto yengane yakho ihlanganiswe nomshini wokulandela ngomkhondo we-GPS cam ukugcina iso kwimikhuba yabo yokushayela noma ukuyivimba ekushayeleni ebusuku kunganciphisa kakhulu amathuba okuba nengxenye kwengozi. Ukusuka ngesivinini sokuhamba uya endaweni eqondile, abazali bathola ukufinyelela olwazini olubalulekile ukusiza ukuvikela izingane zabo. Ikhamera evikelekile ye-Mini Body Worn ene-Encryption [Ine-LCD Screen] (BWC060) iyithuluzi elihle kakhulu kubazali nasezinkampini ukukhomba abashayeli nabangalawuleki bezingane.
Inani labagibeli ezitimeleni, emabhasini nasezinsizakalweni zokuqasha ezizimele liyakhula minyaka yonke kanye nezingcingo zokucaciswa okukhulu nokuziphendulela komphakathi. Ukusetshenziswa kobuchwepheshe bevidiyo obugqokwa ngumzimba kuyanda kakhulu kunethiwekhi enkulu yezokuthutha ephendula lezi zingcingo.
Ubuchwepheshe bevidiyo egqokwa ngomzimba busetshenziswa kahle ngezindlela ezintathu ezithile;
I-1. Ukusingathwa isikhalazo kwamakhasimende kusetshenziswa amavidyo wevidiyo kuyasetshenziswa esikhundleni samafomu wesikhalazo akwi-inthanethi ukudala ukusebenza kokubika khona lapho kunethiwekhi yezokuthutha.
I-2. Izisebenzi ze-Courier nezidingo zisebenza ngobuchwepheshe bevidiyo ezigqokwa ngomzimba ngezinjongo zokuqinisekiswa kwekhwalithi njengobufakazi bokulethwa nama-signature athungelwe yikhamera.
I-3. Njengokuvimbela okusebenzayo ekulweni nokukhwabanisa kwamathikithi nokuziphatha okulwa nenhlalo.
Izitimela zaseVirgin sezingumqhubi wokuqala wesitimela wase-UK ukuhlinzeka ngamakhamera agqoke umzimba ukumboza bonke abantu bayo abaphambili, okuholele ekuhlaselweni kwabasebenzi kwehle ngaphezu kwesigamu. Imiphumela yocwaningo iveze ukuthi ngaphezu kuka-80% wabasebenzi bazizwa bephephile emsebenzini ngenkathi begqoke ama-bodycams futhi cishe ama-90% angabancoma kozakwabo.
Amakhamera omzimba angasetshenziswa ukuvikela abasebenzi abathengisa, izakhiwo kanye nomphakathi jikelele. Ucwaningo lukhombisa ukuthi amakhamera agqokwa ngomzimba anomphumela wokuvimbela nezindlela zokusekela zokunciphisa udlame, izinsongo nokuhlukumezeka emsebenzini. Amakhamera nawo angaba nomthelela omuhle ekushintsheni kokuziphatha kwabasebenzi namakhasimende uma bebona ukuthi bayahlungwa.
Inhloso yamakhamera agqokwa ngumzimba ukunciphisa udlame olubhekiswe kulowo ofaka ikhamera, ukuhlinzeka ngobufakazi bokuxhumana / nezenzo ezithathiwe ukuze kufakazelwe noma iziphi izinsolo futhi zinikeze umbono ongashayi eceleni futhi olungile wesigameko, ukusebenzisana noma umsebenzi. I-CCTV iyithuluzi elihle elihlala ingenawo umsindo, kepha amakhamera omzimba anikezela ukwesekwa okwengeziwe kanye nobufakazi.
Izikhungo zokuthengisa zingasebenzisa amakhamera womzimba wokuqashelwa ubuso bomzimba ukunciphisa inkohliso nobusela. Izinkampani zifaka izithombe zabantu abafuna ukuzibuka, njengabahwebi abaziwayo, abasebenzi abajabhile noma abanye abantu abathakazelayo, ohlelweni. Uhlelo luzobe lubheka labo bantu esitolo. Ukwebiwa kwezitolo kuyenzeka nasekhawunteni yokuphuma njengoba ama-cashiers ehluleka ukuskena imikhiqizo yabangane nomndeni. Izinhlelo, ezifana ne-Stop Lift ngamakhamera okuphepha kanye ne-intelligence yokufakelwa esetshenziswayo ukuthumela izexwayiso njengoba lokhu kwenzeka.
Kunemikhiqizo, ngokwesibonelo, engeke ijabulise ukugqoka enye into ngaphandle kwe-alamu yokwesaba enobuhlakani ngenxa yokuqonda kwekhasimende ukuthi libhekiwe. Kuyafana nokuphikisana nokuqapha onogada abathengisa eminyango kuyinto eyisikhumbuzo esingokoqobo kulabo abangaba amasela abangamukeleki.
Embikweni wakamuva, "iBiometric Marketing 2019," kutholakale ukuthi ngaphandle kokukhathazeka, abathengisi bahlola ubuchwepheshe be-biometric, kufaka phakathi ukulandelwa kokuziphatha kanye nokuqashelwa kobuso nezwi, kokukhangisa nokukhomba kwephromoshini. Lezi zinhlelo zingakhomba futhi zilandelele abathengi ezitolo zezitini nodaka futhi zifunde okuthandayo, njengokuthi abathengisi abaku-inthanethi bawasebenzisa kanjani amakhukhi. Ulwazi lungasetshenziselwa ukuxhumana nabo ngocingo lwabo, izimpawu ezisesitolo noma ngezinye izindlela.
Ukunyuka kwamanani obugebengu nokuhlaselwa kwamaphekula emhlabeni wonke kubangela isidingo esikhulu sokwenza ngcono amasu wokuqapha ezifundeni ezahlukahlukene. Amakhamera omzimba ahlinzeka ngombono ocacile wokuqhathanisa nolwazi langempela lwesikhathi ngezinto ezenzeka. Njenganoma yiliphi ibhizinisi elinokusungula ngokomzimba, ukweba kuyinto evame kakhulu ebiza amabhizinisi izinkulungwane, uma kungenjalo izigidi, amadola ngonyaka. Abasebenzi babhekene nenani elikhulu lezimpahla ezebiwe, kepha kubathengisi bezitolo, kukhona nokukhathazeka kwabanye abantshontsha imikhiqizo ngesikhathi sokuhamba. Qinisekisa ukuthi unezinyathelo eziqinile zokuphepha ezikhona. Abasebenzi kumele bagqoke amakhamera omzimba ukwenza ubufakazi bezimpahla ezebiwe namakhamera omzimba ngokulandela nge-GPS ezimotweni ukuthola indawo yezimoto ezibiwe nemikhiqizo.
Kuyo yonke le minyaka, ubuchwepheshe bevidiyo busetshenziselwe ukuhlola ukuboniswa kwabasebenzi ezinhlobonhlobo zezinto ezingcolisayo. I-Helmet-Cam ene-GPS ubuchwepheshe obulula futhi abubizi kakhulu ukusetha nokusebenzisa. Liqukethe ikhamera yevidiyo engasindi, indlela yezinsimbi zezindlu ngendlela evumela abavukuzi ukuthi benze umsebenzi.
Ngokusobala, noma yiluphi uhlelo olusiza abasebenzi bezokuphepha ukugxila emisebenzini ethelayo ethe xaxa luyanda futhi luthuthukisa ezokuphepha. Kepha ukutholakala kohlelo lokuphepha lwevidiyo olwenziwe ngezifiso oluhlanganiswe nezinye izinhlelo zokulawula nokuphatha kunganikeza imisebenzi eminingi yezimayini ngethuluzi elinamandla kakhulu elinganikeza izinzuzo ezibalulekile kwezinye izindawo futhi, njengokuphepha nokusebenza kahle kwesibonelo. Lapho izimenenja sezibona amandla asezandleni zazo, zibona amathuba amasha okusebenzisa futhi inani elingeziwe lingatholwa ekutshalweni kwemali.
Amakhamera wokuqashelwa komuntu ekungeneni nasekuphumeni kuzoqapha ukuthi ngubani ongena nokuthi ngubani ophumayo. Amamayini amaningi anokuphepha nezindawo zokubheka, ngakho-ke kunesikhathi esanele sokubamba ubuso ngokucacile. Abasebenzi bezomthetho i-OMG bethuthukise uhlelo lwabo lokuqashelwa kobuso oluhlanganisa imisebenzi yokuqhathanisa abantu ukuze babone abantu futhi bavikele abasolwa noma abantu ababhalwe phansi ukuthi bangene emagcekeni ezimayini.
asikhulumi lapha ngemikhiqizo esekholfini. Njengomthengi ongaba khona, udinga ukukhomba umphakeli ofanele onemikhiqizo efanelekile nesipiliyoni, futhi futhi udinga ukuqinisekisa ukuthi uhlelo olukhethiwe selwakhiwe futhi lwafakwa ngempumelelo. Njengomkhiqizo we-OMG amakhamera agqokwa ngomzimba asiza abasebenzi abasebenza ezimayini ukuthatha ividiyo yezimo kanye nesigqoko sokuzivikela nge-cam ne-GPS ewusizo ekutholeni abasebenzi abalahlekile ngaphansi kwegquma futhi i-GPS izolandelela lapho abasebenzi bekhona.
Amakhamera agqokwa ngomzimba (i-BWC), abizwa nangamakhamera omzimba ne-video egqokwa ngomzimba, noma amakhamera angagqokeki ngumsindo, ividiyo, noma uhlelo lokuqoshwa kwezithombe. Abasebenzi nabaqashi embonini yezokwakha bayaqhubeka nokubhekana nezingozi nezinselelo eziningi ezivelayo. Ukusuka ekushoneni nasekuweni kanye nasekuphazanyisweni kwebhizinisi okuhlobene nesimo sezulu kuye imililo nemishini eyebiwe, izingosi zokwakha zizobhekana nengozi engenakubalwa nsuku zonke. Amakhamera omzimba anikeza ubufakazi empeleni ngokwenzekile futhi avikela amathuluzi antshontshiwe.
Umlilo wesiza sokwakha akuyona into exakile. I-spark eyodwa ephuma esandeni, i-welder, ugwayi, i-wire kagesi, ukukhanyisa okwesikhashana nokunye okunjalo kungamisa kalula izinkuni, izinyibilikisi, ukupakisha noma uphethiloli konke okutholakala ezindaweni zokwakha kuvutha amalangabi. Amakhamera omzimba agqokwa yizisebenzi adala i-alamu engozini futhi i-GPS inikeza izinkomba emaphoyiseni lapho umlilo uvutha amalangabi.
Iziza zemisebenzi ezingafinyeleleki zingadala ukulimala okungaziwa kusuka kumapayipi avuzayo noma aqandisiwe, umsebenzi oshisayo oshisayo, kanye nokwebiwa / ukonakaliswa kwemishini nezinto zokwakha. Amakhamera womzimba we-OMG noma izigqoko zokuzivikela ezinekhamera yizindlela ezingcono kakhulu abasebenzi abangazigqoka lapho behamba ukuze bathole isivikelo, kwesinye isikhathi abasebenzi abathandani noma abafuni ukusebenza ndawonye futhi badale udlame emsebenzini, uma bazi ukuthi bagcwaliswa ngokushintshwa kokuziphatha kwabo ngomzuzwana.
Ukukhiqiza ukucubungula kwezinto zokusetshenziswa noma izingxenye zezimpahla eziqediwe ngokusebenzisa amathuluzi, abasebenzi, imishini kanye nokusebenza kwamakhemikhali. Ukukhiqiza ngezinga elikhulu kuvumela ukukhiqizwa kwenqwaba yezimpahla kusetshenziswa inani elikhulu labasebenzi kanye nobuchwepheshe obuphambili. Amasu wokukhiqiza anele enza abakhiqizi basebenzise inzuzo yezomnotho esikalini, bekhiqiza amayunithi amaningi ngentengo ephansi.
Siyazi ukuthi ngokomthetho wezomnotho inani elikhulu labasebenzi alisebenzi kangako. Lapho izinkulungwane zabasebenzi endaweni eyodwa bese ama-100% amathuba ezinye izisebenzi zingasebenzi kahle, ngakho-ke ukubeka amakhamera omzimba kubasebenzi kuzonikeza idatha yokuthi izisebenzi zingasebenzi kahle kepha zithathe amaholo njalo ngenyanga. Okwesibili, amakhamera omzimba anikeza ubufakazi balaba basebenzi abaphula imithetho yenkampani. Okwesithathu, ukuphepha yisici esiyinhloko sanoma iyiphi inhlangano, inkampani noma izitolo zomzimba amakhamera anikeza ubufakazi obuthengisiwe bemikhiqizo eyebiwe. Amakhamera we-CCTV amadivaysi amadala okubhekwa kodwa awarekhodi, kepha ngamakhamera omzimba, abasebenzi bezimakethe bayakwazi ukubona abathengi ukuthi bacabangani ngemikhiqizo yabo.
Ikhamera yezokuphepha iyingxenye yempilo yansuku zonke. Kuyingxenye ebaluleke kakhulu ezinhlelweni zonke zezinhlangano zokuphepha. Kufanele futhi kube yingxenye yohlelo lwakho losizo lwenhlekelele. Izinhlangano eziningi zishaya indiva izinzuzo ikhamera yezokuphepha ezingaba nazo kuzo zombili izinhlaka. Ukuxhumana ezinhlanganweni kufaka zonke izindlela, ezihlelekile nezingahlelekile, lapho imininingwane idluliselwa khona, phansi, nakuyo yonke inethiwekhi yezimenenja nabasebenzi ebhizinisini. Lezi zindlela ezahlukahlukene zokuxhumana zingasetshenziselwa ukusabalalisa imininingwane esemthethweni phakathi kwabasebenzi nabaphathi, ukushintshana ngokuzwa namahemuhemu, noma yini ephakathi. Ngakho-ke, uma abasebenzi begqoka ikhamera yomzimba imininingwane esemthethweni kungenzeka ingaxoxi futhi ingaphumi njengamahemuhemu.
Ngesikhathi somlando wokuqala waseMelika, ohlehlela emuva eminyakeni engaphezudlwana kwengu-150, abaphathi baseMelika basebenze njengezinkampani zokuxhumana eziqinile "eziphezulu". Noma ngabe yini iningi labanikazi benkampani elithe umthetho. Ukube inkampani ibinekomidi eliphezulu labaphathi, amasu okwenza konke kusuka ekuthengiseni umkhiqizo nasekubhekaneni nabasebenzi angaxoxwa ngasese. Lapho lezo zinqumo sezenziwe ngabaphathi, amazinga aphansi abaphathi abuzwa ukuthi enze lezo zinqumo zisebenze. Abasebenzi bebengafakwanga okuncane. Benza njengoba betsheliwe noma bathola umsebenzi kwenye indawo.
Izinsizakalo zikagesi, igesi nezokuhlanzeka
Izikhungo zikagesi ziyingozi enkulu ekukhanyeni ukuthi noma ukunganakwa okuncane kungenza impilo ibe ngumuntu. Ukusebenza kwamakhamera agqokwa ngomzimba njengokokuqanjwa kwezinto ezintsha kubalulekile ngokufanayo ehhovisi likagesi. Ubuhle bokusetshenziswa kwamakhamera agqokwa ngomzimba enhlanganweni kagesi Hambisa abamele ukuthi bahambisane nemithetho yezokuphepha ngesikhathi sabo sokusebenza ngezizathu zokuthi noma ukunganakwa okuncane kwabasebenzi kubangela ububi bangempela kubo. Ukuhlola umcimbi wangempela, kubalulekile ukuthumela yonke imigomo nezinkombandlela zokuziphatha kahle. Gcina abagqekeli kanye nabantu abangavunyelwe abavela ewadini yenhlangano kagesi hhayi ukuthi bahlole ukulimala okwamanje, ngaphezu kwalokho, ukuze ubavikele ezikhungweni eziyingozi zikagesi.
Amaphethini amaningi emisha yokushayela akhangisa ngophethiloli kanye nowoyela. Inhlangano kawoyela negesi e-United States of America inikeze amakhamera agqokwa ngomzimba ukuphepha kwawo nabasebenzi basensimini. Isizathu esingemuva kokuqashelwa kwekhamera ukwandisa ukusebenza kwezokuphepha, gcina ngokucophelela kubasebenzi basensimini. Ngokusebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba ngabezokuphepha nabasebenzi basensimini le nhlangano idinga ukulandela izinhloso.
Ngokusebenzisa amakhamera agqokwe umzimba ngosizo lwenhlanzeko, ngaphakathi kwamapayipi endle oyinyumba nezintambo zosizo ezizimele kungahlolwa futhi kuhlolwe ngenkathi kubanjwa izithombe ngokuqhubekayo. Uzobona izingqinamba ezahlukahlukene nokuthambekela kwazo ngokushesha. Isibonelo, i-CASA Sanitary Wares Factory, eCanada inikeze amakhamera agqoke umzimba kochwepheshe bayo nakwabanye abasebenzi ngehora lesibopho sabo. Basebenzise amaKhamera agqoke umzimba kulokhu okulandelayo:
• Hlolisisa abasebenzi ukuthi bayayigcina yini imigomo yenhlangano noma ababukeli ukulawulwa kwemfucuza
• Qaphela imfucuza
• Vumela inhlolovo ephathekayo yokubukwa kwendawo okungekho kuyo
• Izizathu zesikrini zemisaps nobubi obuhlukile
• Gcina abagqeki kanye nabantu abangavunyelwe kusukela endaweni yensimu yamafutha
• Iskena abasebenzi noma ngabe bayayilandela yini imigomo yenhlangano noma cha
• Uthola isithombe sensimu yokuphehla igesi
Amawashi alawula imfucuza
• Kugwema ukuthatha nokubhubhisa
• Imvume yokubuyekezwa ephathekayo yokubukwa kwendawo okungekho kuyo
Ezezimali, umshuwalense, nezinsizakalo zezezakhiwo
Izinhlangano ezihlobene nemali ezinjengamabhange zibukwa njengezikhungo eziqinisekiswe kakhulu emhlabeni. Sifaka imali yethu, izinto zokuhlobisa, nezingobo zomlando ezibalulekile ngokuya ngazo. Ngale ndlela, uhlaka lokubona ividiyo olukhethekile luyisisekelo kulezi zinhlangano zezimali. Ngokuthuthuka kwamanje kokuqanjwa okusha kanye nombono we-IP, amabhange amaningi athembela ukusiza ngobuningi bezinhlaka zawo zokuphepha ngokubeka izinsizakusebenza kulokhu okusha. Amakhamera agqokwa ngomzimba kanye nezinhlaka zokuqonda zamakhamera we-CCTV ngokuphenya ngokunqenqema kwevidiyo, ngokwesibonelo, ukuvuma ubuso ebusweni kuvumelana nodaba lokuphangwa kwesheke emabhange ngemininingwane yokushintshana okungekho emthethweni nokubamba izithombe zabephula umthetho. Le datha iyasiza ukubona izephula umthetho futhi isiza ngokuqinisekisa ama-akhawunti amaklayenti. Amakhamera agqokwa ngomzimba angathuthukisa ukwethenjwa kwamakhasimende ebhange. Lapho ibhange liqinisekiswa ngokwengeziwe, amaklayenti athile ayoba khona. Uhlaka lwevidiyo esebenza kahle ebhange ngokusebenzisa amakhamera agqokwa ngumzimba kanye namakhamera we-CCTV akhombisa usizo olukhulu. Amakhamera agqokwa ngomzimba athuthele ekubeni yingxenye yehhovisi ngalinye. Cishe, yonke imboni izama ukuyiguqula ukuze ibonwe ngabasebenzi bayo. Ngokufanayo, izinhlangano zomshuwalense zizama ngokomthetho ukusebenzisa ukuqoshwa kwevidiyo ebanjwe ngesikhathi okwenzeka ngaso ukukhombisa noma ukungathandi umsebenzi, futhi bazongena ngokwedlulele kakhulu bezama ukusebenzisa ukuqoshwa kwevidiyo yomuntu oyedwa ekhaya labo noma ezindaweni ezivulekile ukukhombisa ukuthi umuntu uwedlula zonke amanxeba abo. Ngale ndlela, ukusetshenziswa kwamakhamera we-body kubeka eceleni imali eningi enhlanganweni ngoba amakhamera omzimba anikeza ubufakazi bokuthi lo msebenzi ukufanele ukunikeza imali yokuvikela noma cha. Le yinto enziwa izinhlaka zomshuwalense ekusetshenzisweni kwamakhamera womzimba.
Izinzuzo zamakhamera agqokwa ngomzimba kumaBhange nezinye izinhlangano ezihlobene nemali:
• Amabhange aqhubeka nokugxila kulabo abephula umthetho bafuna ukufakwa okukhulu. Ukuhleleka okuhle kakhulu okwenziwe yikhamera okugqokwa umzimba ngamakhamera kungaba ngama-burglaries.
• Ngenxa yokwebiwa kanye nokuphamba amafilimu ekhamera egqoke umzimba angahle asetshenziswe ukuqaphela abasolwa.
Ochwepheshe bezindawo nomhlaba abasebenzisa izinyathelo zokuphepha ngokomqondo futhi bahlale bephapheme emkhakheni basengaba izisulu zezigebengu.
Ungaligqoka ikamela lomzimba? Abasebenza ngokuthile banokusabela okuxubile kulowo mbuzo. Uma ebheka emuva uHinkel uthi kungenzeka ukuthi umgadli wakhe wahlaselwa uma egqoke ikhamera yomzimba kodwa hhayi lokho. Wayenamahloni okuveza ukuthi ungubani noma anikeze ikhophi yelayisense lakhe. Okomuntu onjengaye obonakala engesabi ukudalulwa, ingabe into yokuqopha enjengomzimba ingaba nomthelela ekuziphatheni kwakhe? “Ngicabanga ukuthi izindlela zokuvimbela nokufunda ukuthi ungazifumani esimweni esibi kubaluleke kakhulu,” kusho uHinkel, futhi enezela ukuthi ukuzivikela nokuzivikela ekufundiseni kunikeza izixazululo zesikhathi eside kunalezo ezisetshenziswe ngaleso sikhathi. "Ngicabanga ukuthi kuzofanele ulungiselele umbono wakho."
Kutholakala ku: https://www.pinnacleweringonse.com/body-worn-cameras-for-rail-transportation-and-logistics
UMNIKELI, S., APRILI 22, 2019. IZITOLO ZOMAGAZINI WE-NRF. [Ku-inthanethi]
Kutholakala ku: https://stores.org/2019/04/22/captured-on-camera/
I-Europe, LM, Julayi 5, 2017. I-LPM. [Online]
Kutholakala ku: https://losspreventionmedia.com/body-worn-camera-policy-retailers/
UJohnson, C., nd Izikhombo zebhizinisi. [Online]
Kutholakala ku: https://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Clo-Con/Communication-in-Organizations.html
URebecca Webb, uSep 26, 2017. Sula Ubungozi. [Online]
Kutholakala ku: https://www.clearrisk.com/risk-management-blog/7-risks-wholesalers-must-prepare-for
Ezokuphepha, R., nd Rewire Ezokuphepha. [Online]
Kutholakala ku: https://www.rewiresecurity.co.uk/blog/the-true-cost-of-vehicle-tracking
Amakhamera we-Eva aqinisekisa ukuphepha kwabasebenzi ngamaZimboni igcine ukuguqulwa: Disemba 3rd, 2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-4381 Ukubuka kwe-3 Namuhla